२१ जेठ २०७५ गते हेटौंडामा बाग्मती प्रदेश सभालाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भनेका थिए– म पार्ट–पूर्जा फेरेको मान्छे हो, किड्नी ट्रान्सप्लान्ट गरेको ११ वर्ष भयो । १८–२० घण्टा किन काम गरिरहेको छु ? देश बनाउने उद्देश्यका लागि म खटिइरहेको छु । मर्दा–मर्दा जिएको जिन्दगीलाई आराम दिएको भए हुन्थ्यो, तर देश विकासका लागि लागेको छु ।
संसद्‍मा प्राप्त झण्डै दुईतिहाइ मतको ऊर्जासहित ओलीले प्रदेश सभाहरूमा गएर सांसदलाई जिल्ल बनाउने योजना सुनाए ।​
शुरूआती दिनमा ओलीले बाँडेका विकासका आश्वासन पत्याउनुको विकल्प थिएन । न त कसैले ओलीले अगाडि सारेका योजनालाई चुनौती दिने हिम्मत राख्दथे । मुलुक एक प्रकारले ओलीमय बनेको थियो । हेटौंडामै ओलीले नेपालको आँप क्यानडा र हरियो साग खाडीका मुलुकमा निर्यात गरेर देशमा डलर भित्र्याउने सपना बाँडे ।
तर, विस्तारै ओली सरकारको पाइनमा खिया लाग्दै गयो । केही समयअघि दिवंगत भएका गीतकार रत्नशमशेर थापाले लेखेको ‘ठट्टैमा यो बैंस जान लाग्यो.. ’ बोलको गीत जस्तै प्रधानमन्त्री ओली सरकारको बैंस लगभग सकिएको छ ।
आजकाल ओलीका बोलीलाई जनताले त्यति गम्भीरता साथ लिएको पाइँदैन । मुलुकको कार्यकारीका अभिव्यक्तिलाई ठट्टा र हाँसीमजाकको रूपमा लिने गरेको पाइन्छ ।
सरकारको अलोकप्रियताका कारक– 'गलत पखेटा'
'सरकारका कामको पार्टीले स्वामित्व नलिँदा जनतामा निराशा'
नेकपा केन्द्रीय सदस्य एवं पूर्वमन्त्री आनन्द पोखरेल सरकारले गरेका राम्रा कामको पार्टीले स्वामित्व नलिँदा सरकारका राम्रा काम छायाँमा परेको दाबी गर्छन् । ‘संघीयता कार्यान्वयनका क्रममा तीन तहका सरकारलाई समन्वय गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने चुनौतीको सामना गर्दागर्दै केही समय बित्यो । सरकारको कामले गति लिने बेलामा विभिन्न चुनौती आइलागे,’ पोखरेलको विश्लेषण छ ।
पार्टीभित्रको विवाद, कोरोना संकट र भारतसँगको सम्बन्धमा प्रतिकूलताका कारण सरकारको स्पीडमा ब्रेक लागेको पोखरेलको बुझाइ छ । ‘चौतर्फी घेराबन्दीका बावजुद सरकारले अतिक्रमित नेपाली भूमिमा आफ्नो स्वामित्व स्थापित गर्नका लागि कदम चाल्यो, वर्तमान सरकार र संसद्का लागि यो ठूलो उपलब्धि हो,’ पोखरेल भन्छन् ।
संसद्‍मा दुईतिहाइको सुविधाजनक बहुमत हुँदा पनि वामपन्थी सरकारले जनताको मन जित्न किन सकेन भन्ने प्रश्नमा पोखरेलको जवाफ छ, ‘सरकारले गरेका राम्रा कामको पार्टीले स्वामित्व नलिइदिँदा जनताले थाहा पाउन सकेनन् ।’
'कम्युनिस्ट नेताहरू अरूको भरिया बने'
नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य डा. चन्द्र भण्डारी नेकपाले जनतासँग जुन वचनबद्धता व्यक्त गरेर मत मागेको थियो त्यसको नजिकसम्म पनि सरकार पुग्न नसकेको टिप्पणी गर्छन् ।
‘सरकार बनाउनुभन्दा पहिले निर्वाचनको समयमा जनतासँग जुन वचनबद्धता व्यक्त गरेर मत मागेका थिए त्यसको नजिकसम्म पनि सरकार पुग्न सकेन । सीमा, डुबान, कोरोना, भ्रष्टाचार र महंगीले जनता अप्ठ्यारोमा परेको समयमा कम्युनिष्ट नेताहरू अरूको भरिया बनी आन्तरिक झगडामा लागेका छन्, भण्डारीले लोकान्तरसँग भने ।
भण्डारीले ओलीमा केही गरौं भन्ने इच्छाशक्ति भएपनि पखेटा (सरकारका मन्त्री) छनौट सही नभएको बताउँदै आएका थिए ।
नेकपाभित्र विवाद चर्केको समयमा पनि भण्डारी ओलीको विकल्प खोज्न नहुने बताउँछन् ।
‘सर्वहाराको सरकार आफ्नो परिवार तथा गुट र उपगुटलाई बलियो बनाउने बाटोमा लागेको छ, तथापि सरकारले यस समयमा जुन नक्सा जारी गरेको छ, त्यो राष्ट्रिय स्वाभिमानका लागि गौरव हो,’ भण्डारीको टिप्पणी छ ।